Igumbi leCamelot · iOcean Front/Igumbi lokuJonga-iCamelot Theme
Eli gumbi linemixholo ye-camelot libonelela ngombono omangalisayo wolwandle lwaseMoolack Beach. Igumbi leCamelot libonelela ngebhedi yenkosi enokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kwiindwendwe ezi-2. Eli gumbi libonisa i-chandelier kunye ne-headboard ehonjisiweyo, izinto zakudala, kunye nezixhobo ezifanelekileyo kwinqaba. Igumbi leCamelot libonelela ngeembono zolwandle kwaye lixhotyiswe ngendawo yomlilo, umgangatho, kunye nophahla olunokukhanya. Izinto ezongezelelekileyo zegumbi ziquka ifriji kunye nemicrowave, umenzi wekofu, kunye neTV enescreen esicaba. Bukela ukutshona kwelanga okanye ukuphuma kwelanga kule ndawo ipholileyo eNewport, eOregon.
Eli gumbi linemixholo ye-camelot libonelela ngombono omangalisayo wolwandle lwaseMoolack Beach. Igumbi leCamelot libonelela ngebhedi yenkosi enokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kwiindwendwe ezi-2. Eli gumbi libonisa i-chandelier kunye ne-headboard ehonjisiweyo, izinto zakudala, kunye nezixhobo ezifanelekileyo kwinqaba. Igumbi leCamelot libonelela ngeembono zolwandle kwaye lixhotyiswe ngendawo yomli…
Sibekwe ecaleni kwelitye eMoolack Beach! Le ndawo ikwindawo engasese yeNewport, Oregon enombono omangalisayo wolwandle.
Iofisi ivulwa ngo-9AM - 7PM ukuba uyasifuna!